ပန်ဒိုရာ: ဘလော့ဂ်များနှင့်လွတ်လပ်မှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ စည်းကမ်း
ကွန်ပြူတာကို ပေါင်ပေါ်စတင်လိုက်တော့ အိုင်ပီ (Intellectual Property) အကြောင်း ရေးမလို့ပဲ။ နောက်တော့ ဘလော့ဂ်တွေ လျှောက်လည်ရင်း အတွေးတစ်ခုက ခေါင်းထဲ ၀င်လာတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း တွေးမိတာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ အင်တာနက်ထဲမှာ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ဟာ ဘယ်လောက်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးနိုင်ခွင့် ရှိသလဲဆိုတာရယ် ၊ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိ အထိန်းအချုပ် သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ် သို့မဟုတ် ဥပဒေ လိုအပ်သလဲဆိုတာပါ။ အဲ.. ဆက်ပြီးတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှာ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ထိန်းချုပ်မှု ၊ အုပ်ချုပ်မှု တွေ ဆိုတာ ဘာလို့ လိုအပ် ရတာလဲလို့ တွေးမိပြန်ပါရော။ ဒီလို ဆက်တွေးပြီးတဲ့အခါ တချိန်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတိုပေစတွေ ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။
Thomas Hobbes ( Leviathan 1651) ပြောခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်အရတော့ လူဆိုတာ သူ့ချည်းပဲလွှတ်ထားရင် ရူးမိုက်တဲ့ အပြုအမူတွေလုပ်ကြမယ်။ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်မယ်။ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ လွှမ်းမိုးမယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် လူတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ ဖြစ်ကြမယ့် အရေး တွေအတွက် ထိန်းကွပ်ဖို့ သီးခြားပုဂ္ဂိုလ် (Third Party) လိုလာပါတယ်။ အဲဒါဟာ အုပ်ချုပ်သူ ဆိုတာ လိုအပ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်အရ အုပ်ချုပ်သူ ရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အာဏာကို ကိုင်ချုပ်ထားရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူတွေကို မဟုတ်တာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာ ပိုထင်ရှားပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူဆိုတာ ဥပဒေတွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ပြဌာန်းသူ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေဆိုတာ အဲဒါတွေကို လိုက်နာရမယ့်သူတွေ ဖြစ်တယ်။
John Locke (Two Treaties of Civil Government 1690) ကတော့ Hobbes ရဲ့အိုင်ဒီယာနဲ့ အတော်ကြီး ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ သူက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ Constitution ဆိုတာကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု Trust ဆိုတာကိုလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် အုပ်ချုပ်သူဆိုတာကလည်း ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရင် အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်မယ်။ ဒီတော့ ဒီလို မလုပ်နိုင်အောင် စာချုပ်ကလေးနဲ့ ပြန်ထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့။ အုပ်ချုပ်ခံတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း ထည့်တွက်ဖို့လိုတယ်တဲ့။ အာဏာကို ထိန်းချုပ်တာနဲ့ဆက်စပ်လို့ Montesquieu ကိုတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အာဏာကိုခွဲဝေခြင်း (Separation of Power) ဆိုတာကို ပြောခဲ့တဲ့သူပေါ့။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ။ ဥပဒေပြုရေး အာဏာ၊ တရားစီရင်ရေး အာဏာ ဆိုတာတွေ သိကြမှာပါ။ သူပြောတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ A country is not free if one person has all these three powers.
အဲ ရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ဘရိတ်အုပ်မရတော့ဘူး။ (တော်ကြာ အမည်မသိ လာလည်သူတွေ သိပ်များလာမှာ စိုးရတယ်။ ဟတ် ဟတ်။ စာအုပ်တွေအရ ပြောနေတာပါနော်။) ဒီလိုပါ ပန်ဒိုရာပြောချင်တာက ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ Thomas Hobbes နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဖြစ်စေ အခြား ဘာသာစကားနဲ့ဖြစ်စေ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတွေဖန်တီးထားတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်များ နဲ့ ဘလော့ဂါများ ဆိုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အင်တာနက်ဆိုတဲ့ ကွန်ယက်ကြီးထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာပါပြီ။ ဘလော့ဂ်တွေဆိုတာ သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝအရကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် တည်းဖြတ်တဲ့ကိုယ်ရေးချင်တာတွေကို ကြိုက်သလိုရေးနိုင်ခွင့်ပေးထားသလို ပါပဲ။
မြန်မာဘာသာနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက် အနည်းဆုံး အောက်ကအကျိုးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
၁) အတွေးခေါ် နှင့် ဗဟုသုတများ ပိုမိုကျယ်ပြန့် ပွင့်လင်းလာခြင်း။
၂) နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသော မြန်မာများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာများအကြား ဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် ကျယ်ပြန့်လာခြင်း။
၃) မြန်မာစာပေ မြန်မာစကား တိုးတက်ထွန်းကားလာနိုင်ခြင်း။
၄) ပြည်တွင်း စာပေစိစစ်ရေးအောက်တွင် တင်ပြခွင့်မရသော စာပေများ လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ချနိုင်ခြင်း။
တဖက်ကလည်း အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပီပီ ရေးသူရော ဖတ်သူပါ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိပဲ နည်းပညာအရ လုံခြုံမှု ရှိနိုင်မယ်။ ထိုးဖောက်ပြီး ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ရေးသွားတာတို့။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သတင်းမှား ကို အမှတ်မထင် ရေးမိတာတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာအတွက် ဘယ်လိုအကာ အကွယ်ယူမလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ တာဝန်ယူနိုင်သလဲ။ (Disclaimer ဆိုတာလေး ထည့်ထားရင် အများကြီး အထောက်အကူ ပြုမှာပါ။ ပို့စ်တွေ များလာတော့ ပန်ဒိုရာလည်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်။)
နောက်တစ်ချက်က ရေးတဲ့စာတွေဟာ သူတပါးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်လို့တို့ အချင်းချင်း အယူအဆ လူမျိုးရေး ၀ါဒ စတာတွေ မတူကြလို့ ငြင်းကြခုန်ကြတာတွေ ဖြစ်နိုင်လာပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အတိုင်းအဆမဲ့ ပြင်းထန်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကော်ပီရိုက် ချိုးဖောက်တာတွေပေါ့။ သူကကိုယ့်ကို ချိုးဖောက် ကိုယ်ကသူ့ကို ချိုးဖောက်။ နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စဉ်းစားစရာတစ်ခုက အုပ်ချုပ်မှု တစ်ခုခု လိုတယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂ်တွေကို ဘယ်လို နယ်မြေ ပိုင်းခြား နိုင်ပါသလဲ။ နိုင်ငံအလိုက်ခွဲမှာလား၊ လူမျိုး ၊ နိုင်ငံသားအလိုက်ခွဲမှာလား။ ဥပမာ ပန်ဒိုရာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘလော့ဂ် ရေးတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံက သတ်မှတ်တာကို လိုက်နာရမှာလား။ စလုံးမှာ လောလောဆယ် နေတဲ့အတွက် စလုံးက သတ်မှတ်တာကို လိုက်နာရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက် ကိစ္စဖြစ်တော့ အင်တာနက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရ သတ်မှတ်ထားတာခြင်းမျိုးကို လိုက်နာရမှာလား။
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပဲ ရှိနေပါစေ။ လောလောဆယ် မြန်မာ ဘလော့စဖီးယား ထဲမှာတော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နဲ့ အရေးယူတယ် ဆိုတာမျိုး မကြားရသေးပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘလော့ဂါတွေကို ကော်ပီရိုက်ချိုးဖောက်တာတို့၊ နိုင်ငံရေး ကိစ္စနဲ့ ငြိစွမ်းလို့ ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ အရေးယူခံရတာမျိုး ကြားနေရပါပြီ။
ကော်ပီရိုက် ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ခိုင်မာနေတဲ့ အရာတစ်ခုမို့ ချိုးဖောက်ရင် သိသာထင်ရှားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတို့ အကြည်ညိုပျက်တာတို့ ဘာတို့ကတော့ သတ်မှတ်သူ (သို့) အရေးယူချင်သူရဲ့သဘောထား discretionary power မှာမူတည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အနည်းဆုံးတော့ မြန်မာ ဘလော့ဂါများ အနေနဲ့ ထင်ရှားသိသာတဲ့ ကော်ပီရိုက် ကိုတော့ မချိုးဖောက်မိအောင် စောင့်ထိန်းသင့်ပါတယ်။ ဆန်ခိုးမမိ ဖွဲခိုးမိ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားလည်း ရှိပေတာကိုး။ အဲဒီအပြင် လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ ပညာသားပါသော scholarly approach အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုလည်း ဆွေးနွေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူမှုရေး အနေနဲ့လည်း အသရေဖျက်သလို ဟာမျိုးထိ မဖြစ်ရအောင် အချင်းချင်း နားလည်မှု အရိုအသေပေးမှုတွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့.. ပန်ဒိုရာသည် အလွန်အာချောင်ကာ အလွန်နောက်တတ်ပါသည်။ မကျေနပ်သည်များရှိက စီဘောက်စ်မှာ လာရောက် သတိပေးသွား နိုင်ပါသည်။)
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ တွေမှာတော့ ဥပဒေ ဆိုတာ လိုက်နာရမယ့်သူတွေ ကိုယ်တိုင် ဆွဲကြရတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ စင်္ကာပူလို မိဘဆန်သော အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာတောင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ public consultation လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ခြင်း မျိုးတွေကို ဥပဒေတစ်ခု ပြင်ရင်ဖြစ်စေ ပေါ်လစီတစ်ခု ပြင်ရင်ဖြစ်စေ လုပ်လာကြပါတယ်။ (အဲ တချို့ ကတော့ စလုံးအစိုးရက တရားဝင်ဖြစ်မှု legitimacy ပိုခိုင်အောင် လူလည်ကျရုံပါလို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် စလုံးနိုင်ငံမှာ ပြည်သူဆီက အသံကို ထည့်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ (လူရာသွင်းလာတဲ့ နေရာမှာ) အရင်ကနဲ့စာရင် ပိုပြီး တိုးတက်လာတာကတော့ မငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ပါ။)
ဒီတော့ Thomas Hobbes ရဲ့ သီအိုရီကြီး အရ အရေးယူတာတွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆိုတာတွေ မိုးပေါ်ကကျအလာခံမယ့်အစားတော့ အခုကတည်းက အခြေခံစည်းလေးတွေ သတိမလွတ်ကြရင်း ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လောကကို ဘယ်လို စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် ကလေးတွေ ထပ်မံရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြရင် မသင့်ပေဘူးလား။
လောလောဆယ်တော့ အတွေးတွေနဲ့ အမေးတွေပါပဲ။ အဖြေတွေကိုတော့ ရှာလိုက်ပါဦးမယ်။
US က ဘလော့ဂ်ဥပဒေ လေ့လာရန်။
Posted by pandora at 4:45 PM
တခုခုရေးချင်တယ်။ မရေးတော့ပါဘူး။ ဖတ်တော့ဖတ်သွားတယ် ဒိုရာရေ။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂိုစဖီးယားထဲမှာလည်း ဥပဒေတွေ ဘာတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကောင်းတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ရင်လေးနေတယ်ဗျာ။ နဂိုကတည်းက လူက လွတ်လွတ် လပ်လပ်နေချင်တော့.. ထိန်းချုပ်ခံထားရမှာကို ကြောက်နေတာမျိုးပေါ့။ စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိတာထက်စာရင် စည်းကမ်းလေး ရှိလာရင်တော့ ပိုကောင်းတာပါပဲ။
ကိုစေးထူး.. ကိုအောင်မော်.. ရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ. အတွေးတွေတော့ အများကြီးပဲ. တွေးမိရင် ပန်ဒိုရာလည်း ရင်လေးတယ်...